Xoghayaha wasaaradda arrimaha gudaha oo cadowga madaxweynaha ku tilmaamay dadka diiddan BBI | Star FM
Home Wararka Kenya Xoghayaha wasaaradda arrimaha gudaha oo cadowga madaxweynaha ku tilmaamay dadka diiddan BBI
Xoghayaha wasaaradda arrimaha gudaha oo cadowga madaxweynaha ku tilmaamay dadka diiddan BBI
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Karanja Kibicho ayaa sheegay in shakhsiyaadka ka soo horjeedo geeddisocodka sharci beddelka ee BBI ay yihiin cadowga madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta.
Xilli uu ku sugnaa ismaamulka Kirinyaga ayuu sheegay in cid kasta oo mucaaradaysa hoggaamiyaha wadanka aynan isaga adeeg uga baahan karin.
Karanja Kibicho ayaa hoosta ka xarriiqay in BBI ay dani ugu jirto gobolka bartamaha wadanka iyo si guud dalka.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in ilaa iyo hadda ay dowladdu daabacday 10 milyan oo ah nuqullada dokumeentiga BBI .
Previous article8.5 milyan oo maaskaro ah oo loo qaybinaya dugsiyada
Next articleDHAGEYSO:Wiil soomaaliyeed oo maalmo ku jiray ICU oo isbitaalka laga saaray